HDI pcb Vagadziri China HDI Pcb Fekitori & Vatengesi
8 dura HDI pcb yekuchengetedza indasitiri
Iyi i8 maseru wedunhu bhodhi redziviriro indasitiri. HDI mabhodhi, imwe yeanokurumidza kukura matekinoroji mumaPCB, ave kuwanikwa kuPandawill. HDI Mabhodhi ane mapofu uye / kana akavigwa vias uye anowanzo kuve nema microvias e .006 kana mashoma dhayamita. Ivo vane akakwirira wedunhu kuwanda kupfuura echinyakare wedunhu mabhodhi.
10 dura YEMAHARA DENSITY YAKASANGANA PPCB
Iri igumi redunhu redunhu bhodhi reTelecom indasitiri. HDI mabhodhi, imwe yeanokurumidza kukura matekinoroji mumaPCB, ave kuwanikwa kuPandawill. HDI Mabhodhi ane mapofu uye / kana akavigwa vias uye anowanzo kuve nema microvias e .006 kana mashoma dhayamita. Ivo vane akakwirira wedunhu kuwanda kupfuura echinyakare wedunhu mabhodhi.
22 dura HDI pcb yemauto nedziviriro
Iyi makumi maviri nemasere dunhu redunhu bhodhi rekuchengetedza indasitiri. HDI mabhodhi, imwe yeanokurumidza kukura matekinoroji mumaPCB, ave kuwanikwa kuPandawill. HDI Mabhodhi ane mapofu uye / kana akavigwa vias uye anowanzo kuve nema microvias e .006 kana mashoma dhayamita. Ivo vane akakwirira wedunhu kuwanda kupfuura echinyakare wedunhu mabhodhi.
HDI Circuit bhodhi yeiyo yakadzika system
Iri igumi redunhu redunhu bhodhi reakadzikwa system. HDI mabhodhi, imwe yeanokurumidza kukura matekinoroji mumaPCB, ave kuwanikwa kuPandawill. HDI Mabhodhi ane mapofu uye / kana akavigwa vias uye anowanzo kuve nema microvias e .006 kana mashoma dhayamita. Ivo vane akakwirira wedunhu kuwanda kupfuura echinyakare wedunhu mabhodhi.
HDI pcb yakapetwa Semiconductor
Iyi i4 yakatenderera wedunhu bhodhi yeIC bvunzo. HDI mabhodhi, imwe yeanokurumidza kukura matekinoroji mumaPCB, ave kuwanikwa kuPandawill. HDI Mabhodhi ane mapofu uye / kana akavigwa vias uye anowanzo kuve nema microvias e .006 kana mashoma dhayamita. Ivo vane akakwirira wedunhu kuwanda kupfuura echinyakare wedunhu mabhodhi.